Vaovao - Injeniera lehibe fampifangaroana zavamaniry fivoarana maitso manan-tsaina lalana vaovao fampifangaroana ny varotra orinasa mivantana
Injeniera lehibe fampifangaroana zavamaniry fivoarana maitso manan-tsaina lalana vaovao fampifangaroana ny varotra orinasa mivantana varotra
Ny làlan-kizorana vaovao amin'ny fampivoarana manan-tsaina sy maintso ny fampiroboroboana ny zavamaniry. Manoloana ny fiovana haingana amin'ny zava-misy ankehitriny, ny lozisialy fampifangaroana marobe ihany koa dia miatrika fanavaozana mifanaraka amin'izany. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fanafainganana ny fananganana an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra, nitombo ihany koa ny fangatahana milina beton. Na izany aza, misy ny fitaovana vita amin'ny beton tsy manam-petra eny an-tsena, ary vao maika tsy marin-toetra ny kalitaony. Anisan'ireny vokatra ireny dia efa misy ny vokatra misy automatique automatique, ny lanjany milanja avo lenta, ny kalitaon'ny fampifangaroana tsara, ary ny fampiasam-bola ambany. Fa amin'ny fotoana iray ihany, misy ihany koa ireo mpanamboatra mahasarika ny mpividy ambany ny vidiny, ary ny masontsivana ara-teknikan'ireo fitaovana dia nijanona tamin'ny ambaratonga mahazatra.
Voalohany, amin'ny lafiny maha-marina ny fitaovana. Ny fahamendrehan'ny fitaovan'ny zavamaniry mifangaro lehibe dia hita taratra indrindra amin'ny lafiny efatra amin'ny fanangonana, simenitra, fifangaroana ary rano. Ho an'ny fanangonana, ny marina dia fehezina amin'ny 2% eo ho eo, ny simenitra dia manodidina ny 1%, ny fifangaroana dia manodidina ny 1%, ary ny marina dia 1%. Ho an'ny fanangonana, ny mizana mizana sy ny mizana dia matetika ampiasaina amin'ny fandanjana. Ny mizana fehikibo dia mavesatra matetika ny lanjan'ny fitambarana, ary ny ambongadiny dia mizara ho fitombina sy lanjan'ny tsirairay. Ny fandanjana ny simenitra sy ny vovoka hafa dia mizara ho fomba roa ihany koa: fandanjana ny tsirairay sy ny fitambarana. Ny additives dia mizara fomba fandrefesana telo: volumetric, mass, ary pulse araky ny additives samihafa. Ho an'ny rano dia mizara fomba 2 ihany koa izy, dia ny volumetric sy ny lanjany. Ny fiantohana ny maha-marina ny akora no lakilen'ny famokarana beton ara-barotra avo lenta. Raha mihatsara ny fahamarinan'ny fitaovana dia tsy isalasalana fa ho matanjaka kokoa ny fitaovana.
Faharoa, ho an'ny zavamaniry mifangaro lehibe, ny tanjona lehibe indrindra dia ny hamokatra beton-tsakafo avo lenta. Noho izany, zava-dehibe ihany koa ny fisafidianana akora. Miaraka amin'ny fitakiana matanjaka mihombo amin'ny fitaovana maintso dia voakitika ihany koa ny fisafidianana ireo akora akora. Raha ny resaka additives dia ny residu fako miorina amin'ny indostria toy ny fly ash, ny slag, ny slag water ary ny calcium calciumideide no tokony hampiasaina hanoloana ny fanjifana fanodinana vovo-vovoka madinidinika manokana. Faharoa, amin'ny resaka agregat, ny indostria mifandraika dia azo ampiasaina indray hampiasa loharanon-karena feno sy hahatratra ny tanjon'ny fitahirizana harena.
Ankoatr'izay, ny fifehezana ny fitaovana amin'ny zavamaniry mifangaro marobe dia tokony hohavaozina bebe kokoa mba hahazoana faharanitan-tsaina feno ary hanafaka ny mpiasa. Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana, tsy azo ihodivirana ny fitaovana mandeha ho azy tanteraka. Raha te hitazona toerana ao amin'ny indostrian'ny milina mivaingana ianao, tena ilaina ny mahaolona sy ny faharanitan-tsaina ny rafitra fanaraha-maso.
Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Rafitra fanangonana mitambatra, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Concrete Mixer Spare Parts, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy,